Yaap Ego, ngwa kachasị mma maka azụmahịa dị mfe | Gam akporosis
O ruola ihe dị ka ọnwa asatọ agwara m gị a ọhụrụ ngwa n'ihi na gam akporo na n'okpuru aha nke Yaap Ego nyere anyị otu n'ime ụzọ kachasị mma iji jikwaa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nyefe ego site na nkasi obi nke ọgbọ gam akporo ọhụrụ anyịMa ndị a bụ Smartphones, Mbadamba ma ọ bụ ndị a na-akpọ Phablets.
Mgbe oge ahụ ezi uche gafere, oge eruola nyochaa mgbanwe nke Yaap Money ma ọ bụ ihe m onwe m na-abịa pụtara otu nke kasị mma multiplatform ngwa nke taa maka izipu na ịnata ego site na mkpanaka.
O doro anya, na obere oge a o birila, Yaap Ego jisiri ike kụọ ndị ọrụ nke sistemụ arụmọrụ dị iche iche maka nke ọ dị ugbu a, nke ahụ bụ, na-enweghị ike ibudata ya kpamkpam na ụlọ ahịa ngwa ngwa gam akporo, Playlọ Ahịa Google Play, anyị nwekwara nsụgharị ha kwekọrọ. maka Apple iOS o Windows Phone.
N'oge a dị mkpirikpi oge Yaap Ego na-eburu n'etiti anyị na-ama họọrọ ngwa na-ebu mfe azụmahịa n'etiti ndị ọrụ, kpọmkwem, Yaap Money ama nwere ngụkọta nke ihe karịrị 350 puku nbudata agụta n'etiti gam akporo, Apple na Windows Phone ngwaọrụ, nke enwere ugbua 130 puku ndị ọrụ edebanyere aha ndị tụkwasịrị obi na ngwa ahụ iji ziga ma ọ bụ nata obere ịkwụ ụgwọ kwa ụbọchị.
N'ime data kachasị dị mkpa anyị nwere ike ịkọwapụta na akụkọ mkpirikpi nke Yaap Money, anyị nwere ike ịkpọtụrụ ndị a aha pụrụ iche ọnụ ọgụgụ ojiji nke bu karia ihe ichoro:
A na-eme ihe karịrị arụmọrụ 500 kwa ụbọchị (nnyefe ego na arịrịọ na kọntaktị).
2 n'ime ndị ọrụ 3 edebanyere aha emeela ma ọ dịkarịa ala otu nrubeisi ma ọ bụ arịrịọ.
Tọzdee, Sọnde na Mọnde bụ ụbọchị kachasị ekwo ekwo na ngwa ahụ.
Ọtụtụ mmegharị na-eme n’etiti 19:30 pm na etiti abalị.
Ihe eji mee ihe: nri ehihie na nri abalị, egwuregwu, onyinye.
All ịga nke ọma na nkwado site na ọrụ nke ndị dị iche iche mobile nyiwe nke ọ bụ ugbu Yaap Ego, sụgharịrị n'ime mmepe ngwa ngwa iji nye ọrụ ka mma ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na mgbakwunye na itinye na mmelite ndị ga-eme n'ọdịnihu nke ngwa ọrụ ndị a na-atọ ụtọ dịka ndị m ga-edepụta n'okpuru:
Direct njikọ na ngwa na-ekere òkè na aku na uba dị ka Timpik, netwọk mmekọrịta iji kpọọ egwuregwu nke ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ozugbo nye onye ọrụ nke ahaziri otu egwuregwu ma debekwa ụlọ ikpe (football, paddle tennis etc.).
Mmekọrịta na ngwa ndị ọzọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya: ịzụrụ ihe ndị aka abụọ, ịkwụ ụgwọ maka ọrụ n'etiti ndị mmadụ ...
Ndị a anọ ọhụrụ atụmatụ nke doro anya na-adọrọ mmasị nke ukwuu, ụlọ ọrụ na-emepe ngwa ahụ na-agwa anyị ozugbo na ha ga-adị otu afọ a na sekọndrị nke abụọ nke ya.
Ọ bụrụ n ’ị ka bụrụ otu n’ime ndị ọrụ ole na ole na - amaghị omume ọma niile ọ na - enye anyị Yaap Ego iji mezuo obere azụmaahịa nke oge anyị taa, M na-adụ gị ọdụ ka ị gafee ọkwa a na m mere n'oge ya ebe anyị na-akọwa nke ọ bụla n'ime ọrụ ya dị oke mkpa na nke bara uru iji kwụọ, zipu ma nata ego n'ụzọ dị nkasi obi site na ọdụ ekwentị anyị, ihe ọ bụla sistemụ arụmọrụ.
Nwere ike ibudata Yaap Ego maka gam akporo na ịpị ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Yaap Money, ngwa ịkwụ ụgwọ ekwentị nke na-ewu ewu
Google na-atụ anya njikwa nke ngwa site na 'Voice Access' na mmemme I / O
ZTE Nubia Z9 bụzi gọọmentị: 5,2 "ihuenyo FHD, Snapdragon 810 na igwefoto 16MP